तरकारीमा खुद्रा व्यापारीको लुटधन्धा ! – NewsAgro.com
November 13, 2017 newsagro0Comments कालिमाटी तरकारी बजार, तरकारी, तरकारी विकास निर्देशनालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय
सरकारले तरकारीको कारोबारमा संलग्न बिचौलिया र ठूला व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने ।
यो वर्ष तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले पनि गत वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर भाउ पाएका छन् । काभ्रेका किसान दिनेश घिमिरेका अनुसार पोहोरको तुलनामा यो वर्ष किसानले ४० प्रतिशत बढी लागत मूल्य प्राप्त गरेका छन् । उनका अनुसार गत वर्ष ठूलो परिमाणमा तरकारी उत्पादन हुँदा किसानले निकै कम मूल्य पाएका थिए । ‘यसले गर्दा किसान ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य भए । घाटा खाएका अधिकांश किसानले यो वर्ष तरकारी खेती नै गरेनन्’, घिमिरेले भने,‘यसले गर्दा यो वर्ष उत्पादन निकै कम भयो । उत्पादन कम हुँदा किसानले लागत मूल्यअनुसार यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी मूल्य प्राप्त गरेका छन् ।’ घिमिरेको भनाइप्रति धादिङ चरौंदीका किसान हेमनाथ थपलियाले पनि सहमति जनाए । थपलियाका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष झण्डै ४० प्रतिशतले उत्पादन कम भएको छ । तर भाउ भने राम्र आएको छ ।
← इरान र इराकको सीमामा शक्तिशाली भूकम्प ,६५ को मृत्यु
चिकित्सा अध्यादेश प्रमाणीकरण →
कृषि प्राविधिक बिषय पढ्नुभएको छ ? जागिरको अवसर खुल्यो, कृषि विभागले माग्यो १ हजार २२ जना कृषि प्राविधिक
पाँच किलोदेखि ५० किलो तौलसम्मको सिलिण्डर